Sidee loo fuliyay Howlgalkii lagu dilay Hogaamiyahii kooxda Daacish ee Al-Baqdaadi? – Walaal24 Newss
Sidee loo fuliyay Howlgalkii lagu dilay Hogaamiyahii kooxda Daacish ee Al-Baqdaadi?
October 27, 2019	Off	By walaal24
Mareykanka ayaa goor dhaweyd shaaciyay in hoggaamiyihii kooxda Daacish dilkiisa, kuna sheegeen in muda ah uu ku jiray dhuumaaleysi hogaamiyaha kooxda la baxday Dowladda Ismaalka ee Daacish lagu dilay hawlgal milatari oo Mareykanka uu ka sameeyay woqooyi galbeed Suuriya.
Madaxweyne Trump oo warbaahinta kula hadlayay Aqalka Cad ee Mareykanka looga arrimiyo ayaa sheegay in in Abuu Bakar Al-Baqdaadi uu qarxiyay jaakaddii u xirneyd oo ay ku rakibnaayeen walxaha qarxa ka dib markii ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ay uga daba galeen god uu ku cararay.
Abuu Bakar Al-Baqdaadi ayaa soo shaac baxay sanadkii 2014, xilligaasi oo uu magaalada Mowsil uga dhawaaqay “dowlad Islaami” ah oo ka shaqeyn doonto waddamada Suuriya iyo Ciraaq.
“Waxa uu ku cararay god dhulka hoostiisa ah, waxaan ku dirnay oo godka uga dabagalay eeyadeenna. Waxa uu qarxiyay jaakaddii uu xirnaa isagoo dilay naftiisa iyo saddex canug oo uu watay. Jirkiisu waxa uu ku googo’ay qaraxa, waxaana ku soo dumay godka. Baaritaanka aan jirkiisa ku sameynay ayaa markiiba muujiyay inuu qofkaasi yahay Al-Baqdaadi.”
Trump waxaa uu sidoo kale sheegay in 11 carruur ah laga soo badbaadiyay gurigii uu degganaa, waxaana uu hadda sheegay in dunidu ay tahay mid amni ah maadaama buu yiri la khaarijiyay “ninkii ugu cadowsanaa dunida”.
“Xalay, Maraykanku waxa uu cadaalladda marsiiyay hoggaamiyaha kaalinta koowaad uga jira argagixisada caalamka. Abubakr Al-Baqdaadi waa uu dhintay. Waxa uu ahaa hoggaamiyaha iyo asaasaha ISIS oo ah ururka ugu arxanka darran caalamka. Maraykanku waxa uu Al-Baqdadi ku daba jiray sanado badan. Ma jiro wax khasaare ah oo ciidamadeena ka soo gaaray hawlgalkaasi oo ay ku dhinteen tiro badan oo ka mid ah dagaalyahannada iyo asxaabta Al-Baqdaadi,” ayuu yiri madaxweyne Trump.
Daawo: Safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya oo booqasho ku tagay magaalada Garoowe ee Puntland
Remarks to the press by the special representative of the Secretary-General James Swan
Maxkamada Ciidamada oo ka soo muuqday shaqsigii u qaabilsanihii Daacish duubista Muuqaallada iyo Qaraxyada
Maxakamadda Sare ee Ciidanka qeybta 60-aad oo xukun dil ah ku riday Askari ka tirsan NISA
Madaxweyne Farmaajo oo munaasabad dhiirrigelin ah u sameeyey Orodyahanno Soomaaliyeed
Madaxweyne Farmaajo oo warqadaha Aqoonsiga ka guddoomay Danjireyaasha dalalka Suudaan
Maamulka Gobolka Hiiraan oo sheegay in la mideeyay Canshuuraha degaannada Hirshabeelle
Dhageyso: Mudanayaasha Baarlamaanka Puntland oo Ansixiyey Xeer Tacliinta Sare
Dhageyso: Maamulka Galmudug oo ka hadlay Ninkii is qarxin rabay iyo halkii uu ka yimid
Dhageyso: Golaha Wasiirrada XFS oo Ansixiyay Hindise Sharciyeedka Hey’adaha Dadka Naafada ah
Dhageyso: Shirka Golaha Wasiirrada oo looga hadlay dhibaatadan ay Ciidamada Kenya u gaysteen Xarumaha Shirkadda Hormuud
Daawo: Madaxweyne Farmaajo “Balantii dhankeena waan fulinay bal aan idin weydiiyo idinku Shabaab dalka maka xoreyseen”
Daawo: Madaxweyne Muuse Biixi oo kulan la qaatay shaqalaha TV iyo Idaacada Dowladda
Daawo: Ra’iisal wasaare Khayre “Hadafka ugu weyn ee horyaallay Dowladda uu yahay dib u dhiska Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya”
Daawo: Ra’iisul Wasaare Khayre “Gogosha dib-u-heshiisiinta Galmudug ayay talaa magaalada Dhuusamareeb”